China yakamira kongiri batching chirimwa Kugadzira uye Fekitori Jusheng
Iyo HZS yakateedzana kongiri yekusanganisa chirimwa ndeye yakasimba kugadzira uye yepamusoro-inoshanda michina iyo inogona kuburitsa dzakasiyana mhando dzekongiri. Nemhando yepamusoro yekugadzira, inoshandiswa zvakanyanya mukuvaka kwakakura uye kwepakati nepakati, mugwagwa axial engineering uye mafekitori anodikanwa ekugadzira zvigadzirwa zvekongiri. Icho chinhu chakanakisa chekugadzira kongiri yekutengesa. Yayo yekusanganisa sisitimu inotora mapatya mugodhi wekumanikidza musanganiswa, iyo ine yakanaka kusanganisa yakafanana, ipfupi kusanganisa nguva, hupenyu hwakareba hupenyu hwekupfeka zvikamu, uye nyore kushanda nekuchengetedza. Iyo inotora yazvino yekudzora tekinoroji senge yemagetsi uremu sisitimu, kutonga kwemakomputa uye kuratidzwa kwedhijitari. Zvigadzirwa zvemagetsi zvekuyera zvine hunyanzvi hwekushandisa uye otomatiki ekuripa mashandiro, nekuyera kwepamusoro kuyerwa. Iyo jecha nejecha rekudyisa sisitimu inotora yakakura upamhi herringbone bhandi rekudyisa uye yakagadzirirwa nzira dzenzira. Icho chisarudzo chakanakira huwandu hwakawanda hwezvikwata zvekuvaka kuti ubudise kongiri yakanaka kwazvo.
DKTEC inogona kusangana nyore nyore nezvinodiwa nevatengi kuburikidza neyakagadziriswa kongiri yekusanganisa michero yeakasiyana hunyanzvi uye maratidziro.
Iyo ine dzakasiyana-siyana dzakagadziriswa kongiri batching michina, uye iyo yekugona inokwana yemusanganisi masosi kubva 60m³ / h kusvika 180m³ / h. Tinogona zvakare kugadzirisa mhinduro zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, email yedu: sales@dongkunchina.com
Uye zvakare, mune imwechete yakatarwa kongiri yekusanganisa simiti ine maviri ma mixer, iyo yekugadzira kugona inogona kusvika 240 cubic metres / awa uye 360 ​​cubic metres / awa.
Chinhu Chikwata HZS25
Dzidziso kugadzirwa m³ / h 25
Kubuda kwemusanganisi m³ 0.5
Yekudyisa mhando Kusimudza hopper
Batcher modhi m³ PLD800
Batcher (vhoriyamu pa bin) m³ 3
Batcher (mabhini huwandu) pc 4
Simba remusanganiswa kw 18.5
Kusimudza simba kw 5.5
Kubuda kureba m 1.5 / 2.7 / 3.8
Upfu zvinhu kg 300 ± 1%
Pombi yemvura kg ± 1%
Yekuwedzera pombi kg ± 1%
Chinhu Chikwata HZS35
Dzidziso kugadzirwa m³ / h 35
Simba remusanganiswa kw 30
Kusimudza simba kw 7.5
Upfu zvinhu kg 500 ± 1%
Chinhu Chikwata HZS60
Batcher (vhoriyamu pa bin)
Batcher (mabhini huwandu)
Yakarerekera bhandi rinotakura simba
Divi (L × W × H)
Max anorema Kururama Aggregate
Chinhu Chikwata HZS90
Max anorema Kururama
Chinhu Chikwata HZS120
Chinhu Chikwata HZS180
HZS dzino kongiri vaiitawo chirimwa rinoumbwa Aisanganisa hurongwa, Material batching hurongwa, Kuyera maitiro uye Electrical kudzora system. Iyo inokodzera nzvimbo hombe nediki dzekuvaka, precast kongiri yechigadzirwa michero uye zvigadzirwa zvekugadzira.
Twin mugodhi kongiri chisanganiso ane simba kusanganisa vanokwanisa, yunifomu vaiitawo unhu uye yakakwirira negoho. Iyo ine yakanaka yekusanganisa mhedzisiro yekongiri neyakaoma kuoma, semi-yakaoma kuomarara, mapurasitiki uye akasiyana akasiyana. Iyo lubrication system uye yakakosha shaft drive system zvese zvinotumirwa kubva kune yekutanga package, uye hydraulic musuwo yekuvhura mashini inogona kugadzirisa kuvhura kweyekubuda musuwo sezvaidikanwa. Iyo yekuvhenganisa mugodhi weiyo huru yekusanganisa muchina inotora anti-adhesion tekinoroji kunyatso kudzivirira kuunganidzwa kwesamende pane shaft. Iyo shaft yekupedzisira chisimbiso inotora yakasarudzika yakawanda yekuisa chisimbiso chimiro kunyatso kudzivirira dhaka kuvuza uye kuve nechokwadi chekuenderera uye kwenguva refu kushanda kweiyo yese yekusanganisa system. Iyo yekuchenesa sisitimu inotora yakakwira-yekumanikidza mvura pombi otomatiki kudzora uye manyore kudzora, Iwo emvura nzira yekubuditsa akawanikwa akananga pamusoro pekusanganisa spindle, iyo inovandudza iyo yekusanganisa kushanda, inowedzera mvura mhute, inoderedza kusvibiswa kweguruva uye zvinobudirira inobvisa simende kuunganidzwa. Iyo inokodzera yakakura-mikuru yekuvaka, yekutengesa kongiri makambani, nezvimwe.
Sarudzai batching muchina; iyo yekudyisa michina yakarongedzwa mune "chigadzirwa" chimiro uye inofudzwa neya bhandi conveyor; inotora nzira mbiri dzeumwe munhu zvinhu zvinorema uye zvinowedzera zvinhu zvinorema; zvemagetsi uremu, PLC kutonga, dijitari kuratidza; t ine kuyerwa kwakaringana, kukwirisa batching kunyatsoita, kumhanya nekukurumidza, yakasimba kudzora basa, kushanda nyore, nezvimwe.
Nyorera zvinounzwa kunze kwezvinhu, kuvimbika kuita; kure manejimendi, kodzero dzevashandisi dzinogona kupihwa, kuzadzisa ekutanga eprojeki manejimendi maitiro; akangwara kuzvidzora, otomatiki kuzvidzora, Chinyorwa kutonga mune imwe; ine chiyero chekuchengetedza, otomatiki kudonhedza muripo, pamusoro-sikero, pasi-pamwero alarm yekugadzirisa; Iyo michina ine mabasa akadai sekushanda kwekuongorora, dhata rekuchengetedza gore, kudhinda, nezvimwe.
Iyo poda, mvura, uye zvinowedzerwa zvese zvinoyerwa nezviyero zvemagetsi; iko batching kurongeka kwakakwirira uye kuyerwa kwakarurama; simende, kubhururuka dota, uye mvura yekuyera hopper inotsigirwa pafuremu nemaseti matatu e sensor, ine chimiro chakatsiga uye kuvimbika kwakanyanya; iyo yekuwedzera metering hopper inoyerwa neiyo imwechete yekusimudza poindi sensor
Chimwe nechimwe chinosanganisa chirimwa chakagadzirirwa vatengi!
Mutengo wechirimwa chega chega chinosiyana nekuda kwenzvimbo dzakasiyana!
Kana iwe uchida kuziva ruzivo rwakadzama rwemutengo weiyo diki yekusanganisa chiteshi, unogona kudana yakananga kutengesa kwedu hotline: 0086-571-88128581
Zvinoenderana nekugadziriswa kwaunoda, isu tinopa yakaringana chitaurwa uye tinorega iwe uwane ruzivo rwaunoda munguva pfupi!
Kugadziriswa kwekongiri kongiri
1.Iva nechokwadi chekuti muchina nenzvimbo dzakatenderedza dzakachena.
2.Clear iyo yakaunganidzwa zvinhu mune iyo hopper munguva yekuita iyo sensor inodzokera kune zero zvakajairika.
3.Check kana mafuta ekuzora pane yega yega lubrication poi akakwana, uye girisi mumhepo system inofanirwa kuchengetedza mafuta akakwana.
4.Tarisa kana mota nemidziyo yemagetsi zvakanyanyisa kupisa kana ruzha rwusina kujairika, ingave chiratidzo chiri chenguva dzose, uye kuti chiratidzo chiratidzo.
5.Check uye gadzirisa humburumbira, shavishavi vharuvhu uye solenoid vharafu kazhinji kuti kuvhura nekuvhara zviite zvinodiwa.
6.Check yega yega system kazhinji, uye gadzirisa nayo munguva kana paine guruva rinodonhedza, gasi leakage, oiri leakage uye magetsi leakage.
7.Musanganisi uye kuburitsa hopper inofanirwa kucheneswa maawa mana ega ega kudzivirira kongiri yakasara kubva mukubatanidza uye kutadzisa kushanda kwese.
8.Kushanduka kwese kunofanirwa kuburitsa yemukati mvura yemhepo compressor, mweya yekuchengetedza tangi uye firita, uye kubvisa malfunctions anoitika panguva yekushanda.
9.Ivhavhavhavuruvuru, chisanganiso, solenoid vharafu, mweya firita uye oiri mhute mudziyo inochengetwa zvinoenderana nemirairiro yakakodzera.
Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso, Otomatiki Aggregate Batching Machine, Aggregate Batching System, Aggregate Batching Dosing Sisitimu, Concrete chisanganiso Spare Zvikamu, Otomatiki Aggregate Batching System,